अनशनरत डा. गाेविन्द केसीको समर्थनमा नयाँ शक्ति बुटवलका युवाहरुको प्रदर्शन | नयाँ शक्ति नेपाल
अनशनरत डा. गाेविन्द केसीको समर्थनमा नयाँ शक्ति बुटवलका युवाहरुको प्रदर्शन
२३ साउन, २०७४
बुटवल – नयाँ शक्ति पार्टी र पार्टीको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा अभियान रुपन्देहीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागको समर्थन गर्दै बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
बुटवलको पुष्पलालपार्कमा नयाँ शक्तिका युवाहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘माफियाले देश घेर्दै, ६०१ सांसदले के हेर्दै ?, वी आर विथ डा. गोविन्द केसी’, डा. केसीका माग छिटो पूरा गर, डा. केसीको जीवन रक्षा गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
सो प्रदर्शनलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै नयाँ शक्ति पार्टी रुपन्देही इन्चार्ज यज्ञ पोखरेल, विमल गिरी, राष्ट्रिय युवा अभियानका ५ नं. प्रदेश सहसंयोजक पंकज राई लगायतले सम्बोधन गर्दै सरकारले डा. केसीका मागहरु तत्काल पूरा गरी केसीको जीवनरक्षाको माग गर्नुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पास हुनुपर्ने, मेडिकल शिक्षामा देखिएका तमाम विकृति र विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने माग सहित डा. गोविन्द केसी ११ औं पटक अनशनमा हुनुहुन्छ । यो ११औं पटकको अनशन सोमबार १५ दिन पुग्दैछ ।